सेभ द चिल्ड्रेन र बीओकेबीच सम्झौता | गृहपृष्ठ
Home बजार सेभ द चिल्ड्रेन र बीओकेबीच सम्झौता
सेभ द चिल्ड्रेन र बैङ्क अफ काठमाण्डूबीच युवा बचत परियोजनाका लागि सम्झौता भएको छ । सो परियोजना मङ्गलवारदेखि नै शुरू भएको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । परियोजनाको उद्देश्य निम्न आय र कम उमेरका युवाहरूलाई समुन्नत भविष्यका लागि बचत गर्न अभिप्रेरित गर्नुरहेको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । सो सम्झौतापत्रमा सेभ द चिल्ड्रेन नेपालका निर्देशक ब्रायन जे. हण्टर र बैङ्क अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले मङ्गलवार हस्ताक्षर गरे ।
युवा बचत परियोजना विकासशील राष्ट्रका निम्नआय भएका १२ देखि १८ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीहरूलाई औपचारिक रूपमै बचत गर्न लगाउन प्रोत्साहित गर्ने एक बहुराष्ट्रिय सिकाइ परियोजना हो । सो अवसरमा बोल्दै सेभ द चिल्ड्रेन नेपालका निर्देशक ब्रायन जे.हण्टरले बचतका राम्रा अवसरहरू दिने हो भने विपन्न र सङ्कटमा रहेका किशोरकिशोरीहरूले समेत बचत गरी त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् भन्ने परियोजनामार्फत देखाउन चाहेको बताए । सेभ द चिल्ड्रेनको नेतृत्व तथा द माष्टरकार्ड फाउण्डेशनको सहयोगमा वाशिङटन विश्वविद्यालयस्थित सामाजिक विकास केन्द्र, विपन्नहरूको सहयोगका लागि परामर्श समूह र न्यू अमेरिका फाउण्डेशन सङ्गठनहरूको गठबन्धनद्वारा नेपाल, कोलम्बिया, केन्या र घानामा सन् २०१० देखि २०१४ भरिमा यो परियोजना कार्यान्वयन गरिंदै छ ।
परियोजनाको पहिलो चरणमा व्यवसाय विश्लेषण र ग्राहक मागको मूल्याङ्कनका आधारमा बचत कार्यक्रमको विकास गरिने बताइएको छ । बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठका अनुसार परियोजनाको वित्तीय साझेदारका हैसियतले बैङ्कले सरल मूल्यमा बचत कार्यक्रम र सेवाहरू उपलब्ध गराई निम्न आय भएका कम उमेरका युवाहरूसमेत वाणिज्य बैङ्कहरूका राम्रा ग्राहक हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न चाहेको बताए । परियोजनाको माध्यमबाट सीमान्तीकृत र बचत गर्ने बानी नभएका युवाहरूलाई यस परियोजनामार्फत वित्तीय क्षेत्रको मूलधारमा समाहित गराउने लक्ष्य लिएको बैङ्कले जानकारी दिएको छ ।
परियोजना अवधिभर अनुसन्धान साझेदारको रूपमा रहेको न्यू एराले परियोजनाको प्रभावकारिताका बारेमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ । यसमार्फत विशेष गरी पिछडिएका क्षेत्रहरूमा किशोरकिशोरीहरूको विकास र वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्द्धनका लागि थप सम्भाव्यताहरू पहिल्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको बैङ्कले जानकारी दिएको छ ।
नयाँ लगानी रोक्दा कृषक मर्कामा
कृषि विकास बैङ्कको तुलसीपुर शाखाले नयाँ लगानी गर्न बन्द गरेपछि स्थानीय किसानहरू मर्कामा परेका छन् । बैङ्कले गरेको कर्जा लगानी समयमै असुली हुन नसक्दा बैङ्कमा निक्षेप कम भएको बताउँदै पूष मसान्तसम्मका लागि नयाँ लगानी बन्द गर्न बाध्य भएको बताएको छ । गतवर्ष२० करोड लगानी गरेको सो बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कले त्यसको ५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो प्रावधानअनुसार बैङ्कसगँ १ करोड रकम कम भएकाले रकम अभावमा नयाँ लगानी बन्द गरिएको बैङ्कका शाखा प्रबन्धक स्थानेश्वर पन्थीले जानकारी दिए । यसबाट दाङका किसानहरू मर्कामा परेका छन् । उनीहरूले आफ्नो जग्गा धितो राखी ऋण लिंदै आएका थिए । तर बैङ्कले पुराना ऋणीहरूलाई लगानी गर्न नरोकेको बताएको छ । निजी बैङ्कहरूले कर्जामा बढी ब्याज लिने भएकाले कृषि विकास बैङ्कमा ऋण माग गर्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो रहेको बताइएको छ । हाल बैङ्कले रू. २१ करोड लगानी गरिसकेको छ भने रू. ४ करोड निक्षेप रहेको छ ।
गणपतिको तिहार अफर
गणपति ज्वेलर्सले तिहारका लागि विशेष योजना ल्याएको छ । मङ्लवारदेखि आगामी शुक्रवारसम्म सञ्चालन हुने सो योजनामा ग्राहकले गुणस्तरीय र नयाँ डिजाइनका गहना खरीद गर्ने सक्ने ज्वेलरीले जानकारी दिएको छ । ज्वेलरीले तिहार मनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताएको छ । काठमाडौंको विशाल बजारमा रहेको यो ज्वेलरी गत अप्रिलबाट सञ्चालनमा आएको हो ।
अहिलेको चाड पर्वको अवसर पारेर सूर्य नेपालद्वारा उत्पादित पुरुषहरूको गुणस्तरीय पहिरन स्प्रिङउडले आफ्नो वेबसाइट डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डट स्प्रिङवुड डट कम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो वेबसाइटबाट कम्पनीका नयाँ उत्पादन, अफरहरू तथा पसलहरु रहेका स्थानका बारेमा जानकारी लिन सकिने छ । कम्पनीले उपभोक्तासँग सम्बन्धित अन्य जानकारीहरू पनि यो साइटमा राखेको छ । स्प्रिङउड ब्राण्डमा प्लेवेयर, वर्कवेयर तथा डेनिम अन्तर्गत विविध प्रकारका सर्ट , टि-सर्ट, टा्रउजर, जिन्स, कार्गो पाइन्ट तथा ज्याकेटहरु उपलब्ध छन् । कम्पनीले वेबसाइटलाई निरन्तर रुपमा अपडेट गरी भविष्यमा यसलाई अझ परिस्कृत गर्ने समेत बताएको छ ।
ल्भर प्यालेस बिहीवारदेखि खुल्ने
हातबाटै चाँदीका सामान बनाउने उद्देश्यले स्थापित सिल्भर प्यालेसले आगामी बिहीवारदेखि औपचारिक रूपमा कारोबार शुरू गर्ने भएको छ । राजधानीमा मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्यालेसले सो जानकारी दिएको हो । प्यालेसले हाल राजधानीको न्यूरोडबाट चाँदीका सामानहरूको कारोबार गर्नेछ ।
सो अवसरमा बोल्दै प्यालेसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वासुदेव भेटवालले नेपाली परम्परागत चाँदीका सामानहरूको प्रवर्द्घनमा प्यालेसले विशेष ध्यान दिने बताए । ‘मेशिनबाट निर्मित चाँदीका सामानले नेपाली संस्कृतिको संरक्षण गर्न सक्दैन’, भेटवालले भने, ‘परम्पराको संरक्षणकै लागि भए पनि हामीले हस्तकलाबाट निर्मित सामानलाई प्राथमिकता दिएका हौं ।’ हातबाट निर्मित चाँदीका विभिन्न गहना, मूर्ति, खड्कुला, पूजाका सामानलगायत नेवारी समुदायले प्रयोग गर्ने ३ सय भन्दा बढी प्रकारका चाँदीका सामान सो प्यालेसमा पाइने भेटवालले जानकारी दिए । मेशिनबाट निर्माण गरिएका सामानभन्दा हातबाट निर्माण गरिएका सामान आकर्षक र टिकाउ हुने भएका कारण ग्राहकले मन पराउने कम्पनीले विश्वास गरेको बताइएको छ ।
मिश्र दम्पतीद्वारा अक्षयकोष स्थापना
नारायणप्रसाद मिश्र र शान्ति मिश्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ४ लाख ३ हजार ३ सय रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छन् । दम्पतीले विश्वविद्यालयमा उच्च पदमा रही संस्थाको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका थिए । दम्पतीले अक्षयकोष स्थापनाका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र यही मङ्सिरमा हुने दीक्षान्त समारोहमा दुइ स्वर्णपदक स्थापनाका लागि ५३ हजार ३ रुपैयाँ प्रदान गरेका हुन् ।
उक्त अक्षयकोषबाट एमए पत्रकारिता विषयमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम हुनेलाई नारायण शान्ति मिश्र स्वर्णपदक र एमलीब पुस्तकालय विज्ञान विषयमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम हुनेलाई शान्ति नारायण मिश्र स्वर्णपदक प्रत्येक वर्षको दीक्षान्त समारोहमा प्रदान गरिने मिश्र दम्पतीले जानकारी दिएका छन् ।
नेस्डोको विना धितो साढे ६ करोड लगानी
राष्ट्रिय शैक्षिक तथा सामाजिक विकास संस्था नेस्डो नेपालको दशौं लघु वित्तदिवस आइतवार तनहुँको दमौलीमा सम्पन्न भयो । दिवसको अवसर पारी सो संस्थाले अति गरीब परिवारसम्म सेवा विस्तार गर्न योगदान पुर्‍याएबापत व्यास नगरपालिका वडा नं ११ की नानुमायाँ बस्नेत, पोखरीभञ्ज्याङ गाविस वडा नं ५ की पविमायाँ रिलामी र सतीस्वाँरा निवासी आसुमायाँ गिरिलाई सम्मानित गर्‍यो ।
सो संस्थाको दमौली शाखाले १८ सय ७३ विपन्न परिवारलाई केन्द्रमा आबद्ध गरी विना धितो ६ करोड ६४ लाख लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । शाखा प्रबन्धक वीरेन्द्रप्रसाद शर्माका अनुसार संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई कर्जा मिनाहा, दुर्घटना खर्च, शैक्षिक कर्जालगायतका सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
दमौली र आसपासका विभिन्न स्थानमा समूह गठन गरी कर्जा प्रवाह गर्दै आएको र न्यून वर्गका मानिसहरू आबद्ध हुने क्रम बढेको उनले जानकारी दिए । सो अवसरमा बोल्ने विभिन्न वक्ताहरूले गरीबी न्यूनीकरणका लागि लघु वित्तक्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै लघु वित्तक्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
सौराहामा कुमारी बैङ्क
कुमारी बैङ्कले चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा शाखा खोलेको छ । यस शाखाबाट बैङ्कले त्यस क्षेत्रवरपरका ग्रमीण भेग तथा भरतपुर नगरपालिकासम्मका ग्राहकलाई सेवा दिन सकिने बताएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले सो शाखाबाट घुम्न आउने पर्यटक तथा पर्यटन व्यवसायीसमेत लाभान्वित हुन सक्ने बैङ्कको अपेक्षा छ । हाल यस शाखाबाट निक्षेप, लगानी, विप्रेषण , प्रतीतपत्र कारोबार हुने बताइएको छ । बैङ्कले निकट भविष्यमै ‘एटीएम’ सेवा पनि प्रदान गर्ने बताएको छ । यो शाखासमेत गरी बैङ्कको शाखा सङ्ख्या २९ पुगेको छ ।
इण्टरनेशनल डेभलपमेण्ट बैङ्क चौतारामा
इण्टरनेशनल डेभलपमेण्ट बैङ्कले सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा शाखा खोलेको छ । सो शाखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण उपाध्यायले मङ्गलवार उद्घाटन गरे । यस सहित बैङ्कका शाखा सङ्ख्या १२ पुगेको छ । बैङ्कले यसै आर्थिक वर्षभित्र ७ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा ल्याउने र ५ वर्षभित्रमा ५० वटा शाखाहरू पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको बताएको छ । चौतारा शाखाबाट निःशुल्क अन्तरबैङ्किङ, एसएमएस बैङ्किङलगायतका सुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ । हाल बैङ्कले व्यक्तिगत निक्षेपमा १२ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिने गरी विशेष मुद्दती खाता, १० प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिने गरी ‘इण्टरनेशनल बेष्ट सेभिङ्स’ खाता तथा ‘माइती बचत खाता’ लगायत अन्य विभिन्न आकर्षक खाताहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय स्तरको बाह्रौं विकास बैङ्कको रूपमा स्थापित यस बैङ्कको अधिकृत पूंजी रू. २ अर्ब तथा जारी पूंजी रू.६४ करोड रहेको छ ।
सिन्धु विकास बैङ्क मेलम्चीमा
सिन्धु विकास बैङ्कले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा शाखा खोलेको छ । यो बैङ्कको दोस्रो शाखा हो । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा मुख्य कार्यालय रहेको यस बैङ्कले काभ्रेको बनेपामा शाखा खोलेको थियो । मेलम्चीमा बैङ्क नहुँदा स्थानीय वासिन्दा काभ्रेको बनेपा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा उक्त शाखा खुलेपछि स्थानीय वासिन्दाका लागि बैङ्किङ कारोबार सहज बनेको छ । पहिलो दिनमै उक्त शाखाबाट ३ सय ५६ जनाले खाता खोलेको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । बैङ्कले दोलखा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ । बैङ्कका अनुसार मेलम्चीमा कृषि, पर्यटन, दुग्ध व्यवसाय तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेको छ ।
एनडीईपीको शाखा खोलेसिमल चितवनमा
एनडीईपी डेभलपमेण्ट बैङ्कले चितवनको जुटपानीस्थित खोलेसिमलमा शाखा खोलेको छ । कमलादिमा मुख्य कार्यालय रहेको बैङ्कको यो १७ औं शाखा हो । सो शाखाको रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपालराज कर्माचार्यले मङ्गलवार उद्घाटन गरे ।
यस शाखाबाट रत्ननगर, शक्तिखोर, सिद्धि, पिठुवा, जुटपानी, पदमपुरलगायतका वासिन्दाले बैङ्किङ सेवा लिन सक्ने बैङ्कले जानकारी दिएको छ । अधिकृत पूँजी १ सय २८ करोड रुपैयाँ रहेको यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैङ्कले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड २९ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको यियो । बैङ्कको गत असोज मसान्तमा ३ अर्ब ५० करोड निक्षेप सङ्कलन तथा ३ अर्ब ४ करोड कर्जा प्रवाह रहेको थियो ।
कामनाको शेयरमा ८ गुणा बढी आवेदन
कामना विकास बैङ्कले खुल्ला गरेको साधारण शेयरका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या ८ गुणा बढी पुगेको छ । बैङ्कले यही कात्तिक ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म ७ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि शेयर आवेदन खुला गरेकामा देशभरबाट मागभन्दा ८ गुणा बढी आवेदन परेको सञ्चार विभाग प्रमुख विष्णु गौतमले बताए । बैङ्कले एनआईडीसी क्यापिटलको सहायक कम्पनी एनसीएम मर्चेण्ट कम्पनीलाई विक्री प्रबन्धक तोकेको थियो ।
एनबीटीआईको जोखिम व्यवस्थापन तालीम
नेशनल बैङ्किङ ट्रेनिङ इन्सिटच्यूट (एनबीटीआई) ले भारतको स्टेट बैङ्क अफ इण्डिया (एसबीआई) को सहकार्यमा दुइदिने जोखिम व्यवस्थापन तालीम सम्पन्न गरेको छ । एसबीआई बैङ्कमा जोखिम व्यवस्थापन हेर्दै आएका प्रमुख महाप्रबन्धक अतानु सेनलगायत चारजना वरिष्ठ अधिकृतहरूले तालीम दिएका थिए । सो तालीममा नेपालका १९ वटा वाणिज्य बैङ्कहरूका ४१ जना वरिष्ठ अधिकृतहरू सहभागी थिए ।
सो तालीममा विशेष गरी नेपाली बैङ्कक्षेत्रसँग सम्बन्धित ऋण तथा सञ्चालन जोखिम र तिनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा जानकारी दिइएको थियो । तालीमको उद्घाटनसत्रमा बोल्दै एनबीटीआई तथा नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नेपाली बैङ्कहरूले जोखिम व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लिइरहेको बताउँदै यस प्रकारका तालीमले स्थानीय स्तरमा क्षमता विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा एनबीटीआईका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष सञ्जीव सुब्बाले संस्थाले प्रदान गर्दै आएका तालीमबारे प्रकाश पार्दै तालीममा सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
एनआईसीको साधारणसभा विराटनगरमा
एनआईसी बैङ्कको मङ्गलवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा आगामी मङ्सिर १७ गते विराटनगरमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले शेयरधनीलाई २६ दशमलव ३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैङ्कले गतआवमा रू. ४४ करोड ९८ लाख खुद नाफा गरेको थियो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४१ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो ।
सूर्य २४ क्यारेट नयाँ स्वरूपमा
सूर्य नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो प्रिमियम चुरोट ब्राण्ड-सूर्य २४ क्यारेट नयाँ स्वरूपको प्याकमा बजारमा ल्याएको छ । यसमा अत्युत्तम स्वादयुक्त विश्वको उत्तम भर्जिनिया ‘सुनौलो पत्ती’ को सुर्ती रहेको छ । ‘सुनौलो गुणस्तरको सन्तुष्टि’ प्रदान गर्ने यो प्रिमियम चुरोट अन्तरराष्ट्रिय स्तरको ‘बेभल एज सिगरेट प्याक’ को ढाँचामा उपलब्ध छ ।
किङ्ग्सका साथसाथै लाइटमा उपलब्ध सूर्य २४ क्यारेट २० खिल्ली भएको प्याकको मूल्य रू. १०० रहेको छ । यसका प्याकहरूमा विशिष्ट किसिमको छपाइप्रविधि प्रयोग गरिएको र लाइट्स तथा किङ्स प्याकका लागि क्रमैसँग नीलो (मेटालिक ब्लू) तथा रातो (मेटालिक रेड) रङ प्रयोग गरिएको छ । चुरोटका खिल्लीहरू पनि पूर्व छपाइयुक्त ‘प्रि- प्रिण्टेड कर्क टिपिङ’ (पीपीसीटी) सहितका प्रिमियम तथा आधुनिक रूपमा प्रस्तुत छन् ।